ဒီမိုကရေစီိံ Thierry Baudet ဖိုရမ် (FVD) "Minerva ၏ဇီးကွက်က၎င်း၏အတောင်ပံပြန့်နှံ့" မာတင် Vrijland
ဒီမိုကရေစီိံ Thierry Baudet ဖိုရမ် (FVD) "Minerva ၏ဇီးကွက်က၎င်း၏အတောင်ပံပြန့်နှံ့"
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 21 2019 အပေါ်	• 34 မှတ်ချက်
မိမိအအောင်ပွဲမိန့်ခွန်း၏အဖွင့်မှာတော့နောက်ဆုံးညဥ့် Thierry Baudet နောက်ဆုံးညဥ့်က "Minerva ၏ဇီးကွက်မိုဃ်းမလင်းမှီမှာယင်း၏အတောင်ပြန့်နှံ့"။ အဆိုပါ bombastic မိန့်ခွန်းအများကြီးခဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဝေဖန်မှုများသို့သော်အနည်းငယ်ဖြစ်ကောင်းကြောင်းကျိုးနပ်သောအရာကိုအဘို့ဤမိန့်ခွန်းမှာနှစ်ဆအောက်ခြေကြည့်ပါ။ ပါဝင်သည် Minerva ကနေဇီးကွက်၏အမှန်တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကို Baudet ရဲ့အားဖြင့်ရည်ညွှန်း: အဇီးကွက်တို့သည် Mason ကိုးကှယျ; ဘုရားမောလုပ်။ အဆိုပါ Freemasons (စသည်တို့ကိုဦးခေါင်းခွံနှင့်အရိုး, သူးလီလူ့အဖွဲ့အစည်း) နယ်သာလန်နိုင်ငံအပြည့်အဝအကျယ်မှာသူတို့ရဲ့အတောင်ပံပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ Hegelian ကရင်လူမျိုးများဂိမ်းသင်တို့မျက်မှောက်၌တခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါ။ အဆိုပါ Leidens Minerva ကလပ်သောက hidden သတင်းစကားဖြစ်ပါသည်, ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Baudet, တော်ဝင်၏မြို့၏ Clingendael ဌာန, ၎င်း၏စစ်မှန်တဲ့သဘောသဘာလွင်ပြင်မျက်မှောက်၌ဝှက်ထားသောပြသထားတယ်။ Clingendael ၏လှည့်ဖျားဆရာဝန်များက၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်အတိုက်အခံပေါင်ပေါ်မှာအကြီးအထွဋ်ပိုင်ခွင့်အင်အားသုံးလယ်လက်ဝဲဘက်တက်မှုတ်စေခြင်းငှါဒီမိုကရေစီထားတဲ့အတွက်သိသာအတိုက်အခံအတွက်အနေအထားသို့ဆောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ (ဗီဒီယိုကိုအောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်)
Thierry Baudet အားလုံးကြီးတွေဒေတာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလူစုအသက်ရှင်ပြသကြဘယ်မှာခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သူကဥရောပ၌ရှိသကဲ့သို့, ပင်နှိုးဆော်စေခြင်းငှါနှင့်အနောက်မျက်နှာအနှံ့ညာဘက်ကြီးထွားရန်။ ဒါဟာထိပ်တန်း form မှာအောင်မြင်မှုများအတွက် Hegelian ပုံသေနည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ generate ရာနှစ်ခုတန်ပြန်ထမ်းဘိုး၏စကား: ဝိရောဓိလိုချင်သောပေါင်းစပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ, သူတို့အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Hegel ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် Baudet, Mark Rutte စီးပွားရေးအန္ဓခေါ်ပါစေခြင်းငှါ:
"ကျနော်တို့ကအနုပညာထောက်ပံ့မှုများနှင့်တော်မူသောငါတို့၏အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ယာဉ်မောင်းများကထိပါးနေကြပါတယ်အပေါင်းတို့ထက်ကိုလက်ခံရရှိသူတက္ကသိုလ်များ, သတင်းစာဆရာများ, လူတွေအားဖြင့်ထိပါးနေကြပါတယ်။ တစ်ဦးက coterie upstart ကွန်ရက်သုံးစွဲသူများ; ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစည်းအဝေးအပူပေးစက်, သူတို့ဘဝ၌မဘတ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စာအုပ်အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်ဖူးဘူးသူတွေကိုရေရှည်မှာအတွက်အရေးကြီးသောကိစ္စများဖြစ်ကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့အကြိမ်ကြိမ်မှားရွေးချယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကို၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချအလောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်အဆိုးမြင် Self-အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးစပ်စုအရောအနှောပါစေ။ "
ကျနော်တို့ Donald Trump ကြောင်းစခန်းအောက်မှာဝိုင်းရံကြဖို့ရန်သည်အဘယ်မှာရှိဥရောပနှင့်ပင်အမေရိကန်၏ကျန်အတွက်လက်ျာ၏ချီးမြှောက်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ကျနော်တို့ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲစခန်းထဲကနေငါသိ၏။ ကျနော်တို့အီတလီနှင့်အခြားဥရောပနိုင်ငံများကကနေငါသိ၏။ ဘက်ထရီဆိပ်ကမ်းပါဝါပေါ်တွင်တင်ကြသည်။ ဒါဟာညာဘက်အနောက်ပိုင်းပြည်နယ်စောင့်ကြိုသောစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးကပ်ဆိုးကြီးနှင့်ဆက်စပ်ပါလိမ့်မည်သည့်လာမည့်ပေါင်းစပ်များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
ငါ့အားဖြင့်ရှည်လျားသောယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲ၏ပျက်ကွက်ဟောကိန်းထုတ်, နှင့်အမေရိကန်စီးပွားရေးပြိုလဲမကြာမီ (ထိန်းချုပ်ထားအတိုက်အခံ) ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်အုပ်စုနှင့်ဆက်စပ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ဒီဇိုင်းအားဖြင့် အရာကြောင့်ပရမ်းပတာ, ပြီးတော့ "သစ်ကိုအမိန့်" ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မည်သည့်ဆန္ဒရှိ polarization ကိုကိုအထောက်အကူပြုရန်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခုအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်အစွန်းရောက်သော Anti-ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းအုပ်စုများနှင့်ဆန့်ကျင်အီးယူကို right-တောင်ပံသိုက်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ဆက်နွယ်နေပါလိမ့်မည်။ ကနေလိုကျပါမညျသောပရမ်းပတာသစ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအဘို့ပါဝါလေဟာနယ်ပေးပါသည်။ ဤသည်တူရကီမှတစ်ဆင့်အီးယူနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်အော်တိုမန်အင်ပါယာ၏ (လည်းရှည်လျား-ဟောကိန်းထုတ်ဒီနေရာကို) အာဏာသိမ်းမှုအဘို့ပါဝါလေဟာနယ်ပေးပါသည်။ ဒါဟာအစဝေဖန်တွေးခေါ်ရှင်နှင့်အတူနောက်ဆုံးအခြေချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတော်မူမည် သူတို့ကိုပူးပေါင်းကြံစည်မှုသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်။ မငြိမ်သက်မှုများများအတွက်တာဝန်ရှိသူတို့အား အကယ်. မည်သည့်ဝေဖန်မှုကိုအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားပစ်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်သာ 1 အမှန်တရားရှိလိမ့်မည်နှင့်ရဲစည်းကြပ်တံ့သောသမ္မာတရားဖြစ်ပါ၏။
Thierry လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပြစ်တင်ခြင်းနှင့် may စေခြင်းငှါ Utrecht အဆို့ PSYOP အမှုအရာကိုဆင်းဆော့ကစားလေ့ရှိတယ်။ ထိုကျွန်ုပ်တို့သည် Freemasons ပေါင် (Minerva Clingendael မြို့၏) Baudet ၏စစ်မှန်တဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိ။ ထိုသို့အစဉ်မပြတ်အရေပြားအောက်ဆုံးခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်အတိုက်အခံများ၏ဂိမ်းထဲမှာကစားနှင့်များအားတိုးပွားစေသည်နေကြသည်။ ကောင်တာ-ထမ်းဘိုး၏တင်းမာမှုအပေါ်သို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဗို့အားပိုမိုကြီးမားသည်။ Heil ကယျတငျတျောမူသောအကြှနျုပျတို့ယခုမခေါ်ပေမယ့်မဲဆန္ဒရှင်သာဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားတှငျကငျြးပခဲ့သည်။ ရာတှငျအထကျတနျးလှာ Clingendael Minerva ပေါင် Baudet အသစ်ကခံစားချက်တွေကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်လူတို့တွင်နှိုးဆော်နိုင်ပါ။ ထိုအနေသမျှကာလပတ်လုံးလူတွေကိုလာမယ့် demagogue ပြီးနောက်အပြေးသကဲ့သို့, ဘက်ထရီ ပို. ပို. တင်းမာမှုများသည်။ ထိုအခါဥတုအတိုင်းလိုက်နာ; လာမည့်ပရမ်းပတာ။ ထိုပရမ်းပတာထံမှအသစ်သောအမိန့်လာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်: "! ဘယ်တော့မှနောက်တဖန်" ။ ဒါဟာအနောက်ဘက်တစ်လျှောက်လုံးတခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါနှင့်ဤသင်မာစတာ script ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကူညီစေခြင်းငှါလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ မာစတာ script ကိုအကြောင်းကိုအားလုံး Read ဤဆောင်းပါးတွင်.
ကျနော်တို့ဥရောပမှာပရမ်းပတာများအတွက်ပြင်ဆင်မှုသကျသခေံကွ၏ တူရကီ (Ordo ab Chao), (ထိုအလယ်အလတ်ကာလ၌ပြီးနောက်) ကိုအံ့ဆဲဆဲအမေရိကန်အင်ပါယာ၏ကျဆုံးခြင်းနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သို့တတိယကမ္ဘာစစ်အားဖြင့်အံ့ဆဲဆဲအာဏာသိမ်းမှု။ သို့သော်အောင်ပွဲ၏ flush ရှိလူများ၏လက်ရှိလူနေမှုတစ်စိတ်တစ်ဒေသမှာ။ ပေါင် Baudet များ၏မှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်။ ဒါဟာ Hegelian ဂိမ်းမှတဆင့်ကြည့်ရှုကြပြီးအမှန်တကယ်နေသောနိုင်ငံရေးသရုပ်ဆောင်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သာသင်ကသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်တန်ခိုးကိုတစ်ခုဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုပေါင်ဘို့လဲကျခဲ့သလား သူများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသှေးကူညီနိုငျသလဲ သငျသညျဒီမိုကရေစီ၏ထင်ယောင်ထင်မှားဘို့လဲသေကြပြီ; တော်ဝင် des Clingendael Institute နှငျ့ Minerva ကထိန်းချုပ်ထား။
ပြန် Marrakesh စာချုပ်ရန် Going: Kutzooi!
Thierry Baudet ဆန့်ကျင်အကြီးစားသရုပ်ပြထွက်ပေါ်လာမည့်
အဆိုပါဥရောပရွေးကောက်ပွဲများနှင့် FVD ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကို (ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ '' ဥပမာအားဖြင့်မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုများ)
Tags:: Baudet, တွယ်ကပ်သဘောတူညီမှုရ, ဒီမိုကရေစီ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, ဖိုရမ်, FVD, အင်ဆီကျွတ်, သာ, meer, Minerva, မဟုတ်, အောင်ပွဲ, အောင်ပွဲမိန့်ခွန်း, မိန့်ခွန်း, Thierry, toespreek, ဇီးကွက်, အတွက်
21 မှမတ်လ 2019 10: 34
သာ chumps လက်ရှိစနစ်ကထောကျပံ့များဆက်လက် ...
... နှင့်မနာလို mom, နှင့်အဖေဇီးကွက်၏အတောင်အောက်၌ဖုံးကွယ်ဖို့ဆက်လက်။
21 မှမတ်လ 2019 12: 10
ငါ Minerva = ဘုရားမောလုပ်အတွက်, ဒါပေမယ့်အပေါင်းတို့၏မှားယွင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်းကျနော်တို့သိသာလျှို့ဝှက်ချက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် Minerva ၏ဇီးကွက်အရေးပါတဲ့သင်္ကေတ (ထိုကဲ့သို့သော Baudet ကိုသိရ) အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ Baudet Minerva နှင့် Clingendael ရဲတိုက်မှလာသည့်တာတော့သေချာတယ်တကယ်တော့အဖြစ်။
24 မှမတ်လ 2019 10: 14
21 မှမတ်လ 2019 12: 27
21 မှမတ်လ 2019 16: 02
21 မှမတ်လ 2019 17: 36
@The လုပ်ခ Slave, ကောင်းသောအပိုင်းအစ! ငါအစောပိုင်းကဤဆောင်းပါးကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကလောင်အမည်အောက်မှာဒီ site ပေါ်တွင်ဖတ်ပါကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့နိုင်ပါ။
"သက်သေလက္ခဏာများနှင့်သင်္ကေတစကားများမဟုတ်သလိုဥပဒေများ, ကမ္ဘာကြီးကိုမဟုတ်အုပျစိုး။ "
21 မှမတ်လ 2019 12: 29
21 မှမတ်လ 2019 12: 41
"ဒီမိုကရေစီိံဂရိတ်အောင်ပွဲဖိုရမ် '' မဲဆန္ဒရှင်များ၏မကျေနပ်မှုသရုပ်ဖော်
21 မှမတ်လ 2019 12: 35
ငါသည်ဤအလှူငွေမစ္စတာ Vrijland များအတွက်အပိုကောင်းတဲ့အချက်ကတော့သွန်းလောင်း။
21 မှမတ်လ 2019 13: 44
Young ကမြည် "dunces" ဟုခေါ်ကြသည်! Holleeder က "နှာခေါင်း" ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာညာဘက်ကုလားကာတစ်ဦးအစွန်အဖျားထောက်ပံ့ခဲ့သည်! နယ်သာလန်အတွက်အစစ်အမှန်အာဏာရှိသည်သောသူတို့က, ငါကြောက်လန့်သလော
21 မှမတ်လ 2019 13: 46
ကောင်းပြီစာဖြင့်ရေးသားဆောင်းပါး။ ကောင်းပြီအဘယ်အရာကိုငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ထင်ပါတယ်။ Baudet 100% ထိန်းချုပ်ထားအတိုက်အခံဖြစ်ပါသည်, သူဖြစ်ကောင်းတောကန်အလံချောင်းကို voirtzetten သငျ့သညျ။ တောအရပ်ကယ့်ကို Pass ဖြစ်ပါတယ်။ Baudet အဆိုပါ VVD '' အဖွင်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများမယ်လို့သူများအတွက်ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ Rutte သူခက်ခဲတဲ့ဟမ် JS ရာ Utrecht, ရန်အဖြစ်အပျက်များ၏အကြီးအအားသာချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျ, အရာရှိတစ်ဦးမှလက်ဝဲ lu လင့်ထားသည် ... ဎညာဘက်အိတ်ကပ် vulken နိုင်ပါတယ်အားလုံးအစိမ်းရောင်ပစ္စည်းပစ္စယ။ အိန္ဒိယတွင်ဒါပေမယ့်ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ verzekeringen.Alles နှင့်အတူအားလပ်ရက်တူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ ကိုမပါတီကောင်းသောအများစုထို့ကြောင့် anddren နှင့်အတူပူးပေါင်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အားလုံးပါတီမူဝါဒအရှုပ်နေကြသည်။ ဒါကစိတ်ကူးပါတယ်။
သင်၏မျက်နှာကိုခုနှစ်တွင်လွင်ပြင်မျက်မှောက်၌ Freemasonry ရာထူးတိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးကျွန်နားမလည်ဘူးစေသော။
21 မှမတ်လ 2019 15: 16
မာ့ခ်တွန်း - "မဲပေးမဆိုခြားနားချက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့လျှင် theywould ကိုပြုစေဘူး။ "
21 မှမတ်လ 2019 16: 35
... ငါရင်ဘတ်ပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရိုက်နှက်ကြပါဘူး, ဒါပေမယ့် Utrecht အတွက်ဒါခေါ်။ တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ရွေးကောက်ပွဲများအကြားဆက်စပ်မှုရှိကွောငျးကိုထပ်ပြသထားတယ်။ ဒါဟာအားလုံးဒီတော့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမယ့် ..
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီရဲနှင့်တူရကီအရာရှိများအကြားကြိုးကိုင်ဒီအပိုင်းအစအဖြစ် ... အာဒိုဂန်သည် THX! 🙂
21 မှမတ်လ 2019 16: 39
ညာဘက် slabdullah de Jong ထိုင် PvdA နှင့် Freemasons bilderberger..de လူကိုတခါပြန်သေးငယ်တဲ့အုပ်စုတစုရဲ့ဂီတကုလားထိုင်အပြည့်အဝလွှဲ၌ရှိ၏, ယခုဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်တဲ့သူတစျဦးဖွစျသညျ .. ၏ဧည့်ဝတ်ပြုဖို့ကျေးဇူးတင်စကား ..with
21 မှမတ်လ 2019 17: 06
ဒါက% နယ်သာလန်နှင့်တူရကီအကြားသဘောတူညီခဲ့ 100 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလွန်အကျွံလူသိရှင်ကြားပြုလုပ်သူကိုနှစ်ဦးစလုံး intrapten တူရကီနှင့်ဒတ်ခ်ျအဘို့စီစဉ်ထား, ကြိုးကိုင်ခဲ့ကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။ သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ဒါမှလွယ် sheeple ။ သူတို့ကပဲမေးပါ။
21 မှမတ်လ 2019 19: 31
ရာဇဝတ်မှုအတွက်နေတိုးမိတ်ဖက်ကျနော်တို့ KUCHENNE ပြောရမည်😀
21 မှမတ်လ 2019 16: 59
ကောင်းပြီ Holleeder သော့ချက်ရာထူးကိုထိန်းချုပ်သူခါတိုင်းလိုသံသယရှိသူကိုဆိုလိုတာ။ ငါနောက်ထပ်သူတို့နေသောရှင်းပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
21 မှမတ်လ 2019 17: 08
ငါ့ကိုဒါခေါ် Heineken ပြန်ပေးဆွဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တူညီပုံကိုရယ်မောကြကုန်အံ့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပတေရုသ OM နည်းဥပဒေဝမ်းကွဲက de Vries အသတ်မရှိကသူ၏အနတ္တအတူတူအပိုင်းအစ milked ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သိုးပျင်းဖြစ်သကဲ့သို့ငါတို့သည်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတယ်ကြပြီမဟုတ် ..holleeder ကျနော်တို့ပတေရုသနှင့်အတူ Holleeder oldies နို့ frothed traits ..
21 မှမတ်လ 2019 18: 45
တဦးတည်းဖြစ်ကောင်းခေါင်းစဉ်, ဒါပေမယ့်တကယ် Heineken နှင့်သူ၏ယာဉ်မောင်းထိန်းသိမ်းခံရာကရဲထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပုံကိုလူသိများသလဲ?
21 မှမတ်လ 2019 17: 53
21 မှမတ်လ 2019 20: 31
ရုံဟုတ်ကဲ့ Hegel ရောဂါ ....
Baudet အသုံးပြုထားသောထားသောစာပိုဒ်တိုများ, ဂျာမန်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Hegel ကနေကိုးကားပုံရသည်။ အဘယ်သူသည် "Minerva ၏ဇီးကွက်မိုဃ်းမလင်းမှီ၏ချိုးသူမ၏လေယာဉ်မှာကစတင်ခဲ့သည်။ " wrote လူတွေသာဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုမြင်ရ, ဒါမှမဟုတ်နီးပါးကျော်အခါနားလည်ရန်အဘို့အ Hegel ဖြစ်သည်။ "
သငျသညျတစျဆငျ့တယ်လျှင် yeah သင်သာမြင်ရပါလိမ့်မယ်😀
21 မှမတ်လ 2019 20: 34
ပို Baudet တစ်ပေါင်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်ဂိမ်းကစားနေသည်မည်သို့အပြည့်အဝသတိထားပါပြသထားတယ်။
ထိုမှတပါး, ဘန်ဝစ်ကိုစေ့စေ့ဒီခေါင်းစဉ်က, မာတင် Vrijland ဖမ်းယူဆီသို့စီးဆင်းသည့်ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေးဝဘ်ဆိုဒ်အားဖြင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
21 မှမတ်လ 2019 21: 21
အဆိုပါ GUTS မဲပေး-တိရစ္ဆာန်များများ၏ရှေ့မှောက်၌ကင်မရာနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောမီဒီယာများမှာဒီညာဘက်ပြောကြောင်းအထက်တန်းလွှာ tool ကို baudet ။ သူအာဏာအရိပ်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း, ဒုတိယအကြောင်းစိတျစှဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြောင်း, အရာနှစ်ခုပြသထားတယ်သစ်ပင်များသစ်တောကိုမမွငျမ Dierenbos အတွက်တိရစ္ဆာန်များ၏အကြမ်းဖျင်း 70% -80% ကြောင်း ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်၌ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ် အမှန်မှာထိုတ-eyed မင်းကြီးသည်မျက်စိကန်း
21 မှမတ်လ 2019 21: 22
21 မှမတ်လ 2019 22: 32
21 မှမတ်လ 2019 20: 57
ငါ Baudet နှစ်ခုကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတောင်ဟော်လန်, Wiegel နှင့်ပေါလု Scheffer အတွက်သတင်းပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အမိန့်တော်ရှိ၏နားလည်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမ shockers စနစ်ကလူနှစ်ဦးပဲအနားယူမဟုတ် duidelijk.Kunnen hs ငှါရှာကြံလေ၏။ သင်ကအမြဲအတူတူပင်လူစုလူဝေးကြောင်းကိုကြည့်ပါ။
ကူကယ်ရာမဲ့နှင့်လူတိုင်းအတွက်သဘာဝ NPOs ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ကျေးကျွန်အမှန်တကယ်မျှော်လင့်ထား hart.Wat Expectantly ကျွန်တော်တို့ကိုခေါက်? ပြောင်းမလား? တကယ်သူတို့ပင်ပြုမူလို့မရပါဘူးမဟုတ်ကြောင်း။ ကျေးကျွန်များအတွက် Mayonnaise နှင့်အတူရုံ fries ။ ဒါဟာပျော်စရာဖြစ်သင့်သည်။ ..asap ... ငါ့အဘို့အဖြစ်
22 မှမတ်လ 2019 07: 29
ငါအလှမ်းဝေးသည့် Minerva ၏ဇီးကွက်နှင့်ယန္တရားနှင့်အတူ link ကိုစဉ်းစားပါ။
Baudet အလွန်ဆွဲဆောင်မှုဆောင်တတ်၏ရှိနေသော်လည်းဒါပေမယ့်တဦးတည်းရဲ့အဓိကအကြောင်းပြချက်ကျနော့်အမြင်ရှိသည့်အထက်တန်းလွှာ Baudet လိုအပ်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
သပိတ်မှောက်ပါလိမ့်မယ်လူတွေကဤအချက်ကိုနဲ့ 'အသံ' ဖို့နိုးထလာသောအခါသူတို့၏အာဏာတည်ဆောက်ပုံထဲမှာပြိုကျမှစတင်ခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ၌လူတွေကို get ရန်, နိုင်ငံရေးသမားများကိုလူကြားချင်ထုတ်လုပ်ရပ်တည်ရမည်ဖြစ်သည်။
နှင့်လိုအပ် Thierry Baudet ထက်နိုးထလူဦးရေအောက်မှာသငျသညျရှိသည်။
၏သင်တန်း, အထက်တန်းလွှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကသူတို့ရာသီဥတုမုသားဖော်ထုတ်နှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုရပ်တန့်ချင်ကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကြောင်း (ယာယီ) ကဒီမှာယဇျပူဇျောနိုငျသညျ။
Baudet စကားလုံးများကိုနိုင်ငံရေးတွင်ယုံကြည်မှု restore ပိုင်ဆိုင်ကြလိမ့်မည်, ထိုတော်တော်ကောင်းကောင်းပြုလုပ်ပါတယ်။
ထိုကြောင့် (ထိုအထက်တန်းလွှာ) အကြောင်းပါအတိအကျအဘယ်အရာကိုပါပဲ။
22 မှမတ်လ 2019 07: 31
"နိုင်ငံတော်ကောင်စီနိုင်ငံရေးနှင့်ရိုးရာနိုင်ငံရေးပါတီများအတွက်ယုံကြည်မှု eroding နှင့်ဒီမိုကရေစီ functioning အန္တရာယ်ကြောင်းကို၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင်ထောက်ပြသည်။ "
ငါ 2017 Volkskrant အတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထဲမှာဖတ်ပါ။
22 မှမတ်လ 2019 09: 28
အဆိုပါအယူအဆကိုသင်ရုံနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဘုရားမောလုပ်အောက်ရှိ link ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးနောက်သင်ရုပ်ရှင်အတူတက်အဆုံးသတ်နဲ့ကျွန်မသို့ပြောင်းရွှေ့ဘယ်မှာမှတ်ချက်ပေးရန်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
22 မှမတ်လ 2019 13: 25
ရလဒ်ကို 20 မတ်လ၏နိဒါနျး
လင့်ခ်, RTLshow ၏ 2018 table ထဲမှာမီဒီယာအတွက်အငြင်းအခုန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
22 မှမတ်လ 2019 17: 59
@Martin, သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုအေဒီကိုဖတ်သင့်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမျိုးကွဲများအပါအဝင် comments..De စိတ်ပျက်လက်ပျက်တစ်တုံ့ပြန်မှုများကဲ့သို့ဖတ်
ပညာရှိအဖြစ်ဇီးကွက်၏ပုံရိပ်ကိုအနေအထားအတွက် ထိုအချိန်မှစ. ဆက်ပြောသည်။ မဟုတ်ဘာမျှမစ္စတာဇီးကွက်များအတွက် omniscient ဇာတ်ကြောင်းပြော၏ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကို Hegel - နှင့် Baudet - အဓိပ်ပာယျ: ဥာဏ်ရသောအခါတစ်ခုခု၏အကျိုးဆက်များကယ့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလာပါတယ်။ ဒါဟာ "သင်ရလျှင်သင်သာမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ " နည်းနည်းပု Cruyff နဲ့တူပုံရသည် သူ့မျက်စိထဲမှာအတော်လေးအနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိခြင်းစဉ် Baudet အားဖြင့်ဒါ, သူ့ကိုအညီ "ရာသီဥတုရူးသွပ်မှု 'အတိုင်းအတာလွန်းအကုန်အကျရည်ညွှန်းသည်။
22 မှမတ်လ 2019 18: 18
အတိအကျငါနောက်ဆုံးညဥ့်သူ့ကိုမြင်ပေမယ့်ပင်တဖန်ငါ့ website တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်မရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ကဖတ်ပါ, ပြီးတော့သူတို့သောင်းချီသောလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်သိမြင်သူတို့ Baudet ၏ကြေညာချက်မှာရှာကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါ၏အ site ကိုရောက်ရှိ, ဒါကြောင့်သူတို့က Google ရလဒ်များကိုငါ့ကိုတွန်းချရန်ရှိသည်။
ဒါဟာကစားသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလူတွေအမှန်တကယ်နိုးသွားကြသည်ကြောက်နေကြတယ်ခံကြောင်းကြီးတွေဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါသာငါ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာလုပ်နေတာပေါ့နှင့်မီဒီယာသန်းပေါင်းများစွာ (ဘီလီယံမဟုတ်လျှင်) ရှိသည်နှင့်သူတို့ကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာထိန်းချုပ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့လူမှုမီဒီယာ၏အတော်လေး trolls စစ်တပ်ရှိသည်နှင့်သူတို့ကွန်ယက်ကို Inoffizieller Mitarbeiter နှင့် AIVD တိုင်းတာခြင်းရှိသည်နှင့်သိတယ် (နှင့်ကအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထား) .. စသည်တို့!
22 မှမတ်လ 2019 19: 51
မီဒီယာ / ပါဝါ Baudet အတူတူသှေးဆောငျနှင့်အတူတင်ဆက်
မီဒီယာမှသာ 1 တင်ပြ! ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီမီဒီယာပန်းခြံအပေါ်ကင်မရာရုပ်ရှင်ကင်မရာနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသာ 1 ဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်နှစ်ခုထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတူမီဒီယာ Park မှာဓာတ်ပုံကို nota စေလွှတ်
22 မှမတ်လ 2019 21: 32
Pim က Fortuyn တကျိပ်တပါးမှာကြီးနှင့် dertigst6မှ5/6ဦးသေဆုံး: 05 Case နောက်လာမည့်သူ့ကိုတွေ့56 ကျည်ဆံထိမှန်နှင့်အစက်အပြောက်အပေါ်56 ရဲတပ်ဖွဲ့များတစ်ခုခုရှိ၏။
6 + =511 နှင့်6×5= 30
တကျိပ်တပါးသောအပြင်ကျနော်တို့ကအရမ်းမကြာခဏအရူးအရေအတွက်ကို # # # # # extreemlowfrequenty ဒွိဝါဒက Eleven ကြုံတွေ့ရ # # #
အဲဒီမှာသူကယူဖို့အချိန်အများကြီးဖြစ်ပြီးသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလိုသည်။ အလားတူစတိုင်သူတို့လိုချင်တာတွေကိုလူ (ert) ပေးရအသုံးပြုသည်။
« တိုက်ခိုက်မှု Utrecht ၏သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် PSYOP မရပါဘူးဧကန်အမှန်အသကျသပွေ?
Thierry Baudet ဆန့်ကျင်အကြီးစားသရုပ်ပြထွက်ပေါ်လာမည့် »